लकडाउनको कारण भिडिओ कन्फ्रेन्सबाटै विवाह ! – BikashNews
लकडाउनको कारण भिडिओ कन्फ्रेन्सबाटै विवाह !
२०७६ चैत १३ गते १४:२४ विकासन्युज
काठमाडौं । हामीले अनलाइनबाट समान किन्ने र बेच्ने गरेको त सुनेका छौं । तर, अहिले लकडाउनको समयमा सामान किन्ने र बेच्ने पनि रोकिएको छ । लक डाउनको बेलामा सिंगापुर र भारतमा अनलाइनबाट विवाह भएको पाइएकाे छ ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले मानिसहरूको जीवनयापन असहज बनाएको छ । यही समयमा सिंगापुरमा एउटा जाेडीकाे भिडिओ कलबाट विवाह भएको छ । दुवै जना चीनको वुहानबाट (कोरोना भाइरसको केन्द्रविन्दु) फर्किएका र उनीहरूको वैवाहिक समारोहमा बोलाइने पाहुनाहरू आउन अनिच्छुक भएपछि उनीहरूले यस्तो उपाय अपनाएका थिए ।
भारतमा पनि अनलाइन विवाह भएको छ । विहार र उत्तर प्रदेश राज्यका केटाकेटीबीच अनलाइनबाट विवाह भएको हाे। पटनाको फूलवारी शरीफमा सदब नसरिन वेहुली बनेकी थिइन र उत्तर प्रदेशको साहिबाबादमा दानिश रजा वेहुला थिए । उनीहरुले आफू बसेकै ठाउँबाट अनलाइन विवाह गरेका हुन । एजेन्सीको सहयोगमा